Xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay Sababta ay u kala xigsatay Kenya & Itoobiya. | Banaadir Times
HomeUncategorisedXukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay Sababta ay u kala xigsatay Kenya &...
Ciidamada Kenya ayuu ku dhaliilay in ay ka baxeen Deegaanno dhaca Gobolka Gedo oo ay dusha ka saaran yahay sugidda amniga iyaga oo aan sameyn wax wargelin ah taasina ay ka baxsan xiriirka & wada-shaqeynta.
Ugu dambeyn waxa uu digniin u diray Siyaasiyiinta Mucaaradka ku ah Dowladda Federaalka, isaga oo sheegay in uu u jeydinayo ka waantoobidda danaha gaarka ah oo fursad u ah Dowladaha.
Wariyaasha ayaa Wasiir Cismaan Abuukar Dubbe weydiiyay waxyaabaha wanaajiyay xiriirka Dowladda Federaalkka ee Itoobiya & waxa xumeeyay Cilaaqaadka kala dhaxeeya Dowladda Kenya.
Dubbe ayaa ku jawaabay in Xukuumadda Addis Ababa aysan faragelin ku heyn Arrimaha siyaasadda Soomaaliya, halka Kenya ay si toos ah & qaab dadban ay u faragelineyso Xaaladda dalka.
Previous articleQaramada Midoobay oo heshiis la gashay Itoobiya si gargaar loo gaarsiiyo gobolka Tigree!
Next articleTaiwan & Somaliland oo kala saxiixday heshiis ay iskaga kaashanayaan caafimaadka, tikniyoolajiyadda iyo beeraha!